January 15, 2022 - ApannPyay Media
အင်ရှူဝါး ဖျော်တဲ့အခါ သတိထားရမည့် အချက်လေးများ
January 16, 2022 January 15, 2022 by ApannPyay Media
အင်ရှူဝါး ဖျော်တဲ့အခါ သတိထားရမည့် အချက်လေးများ EnSure..ဟာ..ဗူးအကြီး..အသေး..နဲ့သော်၎င်း..တခါသောက်ဗူးကလေးတွေနဲ့ သော်၎င်း ပုံစံအမျိုးမျိုး ထုတ်ထားခဲ့ကြတာမျိုးပါ။ အရေးအကြီးဆုံး တချက် ရှိပါတယ်။ လူတချို့လဲ သိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ (သိနေတဲ့သူတွေမဖတ်ပါနဲ့..ကျော်သွားပါ..) မသိသေးတဲ့လူတွေ အတွက်ပါ။ EnSureရဲ့..လျို့ဝှက်ချက်လို့ ပြောရမဲ့အရာ..သတိထားရမဲ့ အရာ တခုရှိနေခဲ့ပီးသားပါ။ EnSure..ဟာ အရသာမျိုးစုံ လာပါတယ်။ စတော်ဘယ်ရီအရသာ.. သခွားမွေးအရသာနဲ့ နို့အရသာအပြင် သဘာဝအရသာမျိုးလဲ လာပါတယ်။ En Sureဆိုတာကို သောက်တဲ့အခါ..အမှုန့်ကို ကိုယ်လိုသလောက် ကိုယ်သောက်မဲ့ ခွက်ထဲ ထည့်ပါ.. ပထမဦးဆုံး.. အဲ့အမှုန့်ကို ရေကြက်သီးနွေးလေး..(အနည်းငယ်သာ အပူဓါတ်ရှိတဲ့ ရေနဲ့ ဖျော်ရပါတယ် ) ပထမဦးဆုံး ရေနဲနဲမှ.. နဲနဲလေးပဲ ထည့်ဖျော်ရတာပါ။ အဲ့လို ဖျော်ပီးတဲ့အခါ ကျမှ.. လုံးဝမပူ..လုံးဝအအေးဓါတ် မရှိတဲ့ ရေနဲ့ ရောပီး..ဖျော်သောက်ရတာမျိုးပါ။ En Sure..ရဲ့ … Read more
ဆုံးပြီလို့ ထင်ထားတဲ့အကြွေးကိုတောင် ပြန်ရစေတဲ့ အကြွေးတောင်းနည်း
January 15, 2022 by ApannPyay Media
ဆုံးပြီလို့ ထင်ထားတဲ့အကြွေးကိုတောင် ပြန်ရစေတဲ့ အကြွေးတောင်းနည်း. အကြွေးမြန်မြန်ပြန်ရအောင် ကြက်ဥလေးနဲ့ အကြွေးဒီလိုတောင်းပါ ကြက်ဥလေးနဲ့ကြွေးတောင်းမယ် အကြွေးမြန်မြန်ပြန်ရစေမည့် ထိရောက်စေသောနည်း ကြက်ဥတစ်လုံးပေါ်တွင် ခဲတံဖြင့် အကြွေးလို့ရေးပါ။ ထိုကြက်ဥထောင်မတ်စေရန် တစ်ခုခုပေါ်တင်ပါ။ ထိုကြက်ဥပေါ်ဖယောင်းတိုင် တစ်တိုင်မီးထွန်းပြီးလျှင် ××××ဆီမှ အကြွေးငွေ ××××ကျပ်အမြန်ပြန်ရပါစေဟု …. လေးလေးနက်နက်…ဆုတောင်းပေးပါ။ အကြွေးများလျင် ၊အတောင်းရခက်သောသူဖြစ်လျင် နေ့စဉ်ရက်ဆက် ကြက်ဥပေါ်မီးထွန်းပြီး ဆုတောင်းပေးပါ။ ဗေဒင်ယတြာများကို ဖတ်ရှု့လေ့လာကြသူများလည်း သင်ဆရာ မြင်ဆရာ ကြားဆရာများ အားလုံးကို… အစဉ်ဦးညွှတ်ကန်တော့လျက်… ဆရာမဇာဇာ 09762011321 အကြွေးနွံထဲက မြန်မြန် ရုန်းထွက်စေနိုင်မယ့် နည်းလမ်း (၇) သွယ် အကြွေးတင်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးဆိုတာ တော်တေ်ာလေး စိတ်ညစ်စရာကောင်းပါတယ်။ အကြွေးတင်သွားရင် ကိုယ့်ရဲ့ဝင်ငွေကို သေသေချာချာကောင်းကောင်းစီမံခန့်ခွဲပြီး စည်းကမ်းရှိရှိသုံးစွဲရင်းနဲ့ ပြန်ဆပ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ တစ်စုံတစ်ခုကို စွန့်လွှတ်လိုက်ရတာမျိုးတောင် ရှိတတ်ပါတယ်။ အကြွေးပြန်ပြန်ဆပ်နေရတာနဲ့ … Read more
တိုက်ခန်းဝယ်တော့မယ်ဆိုရင် မဖြစ်မနေ တောင်းယူရမည့် စာရွက်စာတမ်းများ
တိုက်ခန်းဝယ်တော့မယ်ဆိုရင် မဖြစ်မနေ တောင်းယူရမည့် စာရွက်စာတမ်းများ တိုက်ခန်းဝယ်တော့မယ်ဆိုရင် တောင်းယူရမည့် စာရွက်စာတမ်းများ သင်တိုက်ခန်းဝယ်တော့မယ်ဆိုရင် တိုက်ခန်း အရောင်းအဝယ်လုပ်တဲ့အခါ ဝယ်ယူသူတွေအနေနဲ့ ပိုပြီးခိုင်မာမှုရှိအောင် တောင်းယူရမယ့် စာရွက်စာတမ်းတချို့ကို မဖြစ်မနေ တောင်းယူသင့်ပါတယ်။ အရောင်းအဝယ် လုပ်တဲ့အခါ ရောင်းသူနဲ့ပွဲစားတွေရဲ့ ပြောစကားတွေကိုသာ ဝယ်သူတွေက ယုံကြည်ကြရပါတယ်။ ဒါကြောင့် အရောင်းအဝယ် လုပ်တဲ့အခါ ပိုပြီးစိတ်ချနိုင်အောင် လုပ်သင့်တာတွေ ရှိပါတယ်။ စရန်ပေးရင် ပိုင်ဆိုင်မှု မိတ္တူတောင်းပါ။ ဝယ်ယူသူတွေအနေနဲ့ တိုက်ခန်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေ မှန်ကန်အောင် ပြည့်စုံအောင် သေချာမသိကြဘူး။ဈေးတန်ရင် ဈေးဆစ်ဝယ်ကြတာပါပဲ။ ကိုယ်ဝယ်မယ့်တိုက်ခန်းစာရွက် စာတမ်းတွေကလည်း စရန်မြေပေး စာချုပ်ချုပ်တော့မှ ထုတ်ပြကြတာပါ။တစ်ခါတရံရောင်းသူတွေက ကျန်ငွေချေတဲ့အခါမှသာ မူရင်းပေးမယ်လို့ ပြောတတ်ကြပြီး ဒါတွေကို သတိမူသင့်ပါတယ်။ စာရွက်စာတမ်းကျွမ်းကျင်သူ ဝယ်သူတော်တော်များများက စရန်ပေး စာချုပ်ချုပ်တဲ့အခါ ရှေ့နေခေါ်ဖို့ မလိုဘူးထင်ပြီး … Read more
အွန်လိုင်းမှာ ဈေးကြီးပေးဝယ်နေကြတဲ့ အဆီကျရှားစောင်းလက်ပတ်ယိုလုပ်နည်း
ONLINE မှာ ဈေးကြီးပေးဝယ်နေကြတဲ့ အဆီကျ ရှားစောင်းလက်ပတ်ယို လုပ်နည်း သူများတွေက Online Shop မှာ ဈေးကြီးပေးရတဲ့ ရှားစောင်းလက်ပတ်ယို လုပ်နည်းကို အခမဲ့ မျှဝေပေးပါမယ်။ အစ်မတစ်ယောက်က ရှားစောင်းလက်ပတ်ယိုလေး တင်ထားတာတွေ့လို့ညီမလည်း ပြန်ရှယ်ပါရစေ နော်။ ဝတဲ့သူတွေဒါမှမဟုတ် ဗိုက်ပူတဲ့သူတွေအတွက် အရမ်းအဆင်ပြေတယ်။ အိမ်ရှင်မ တော်တော်များများရဲ့ ဒုက္ခက ဗိုက်ပူတာပါပဲ။ ညီမလေ အဲ့ယိုလုပ်နည်းကို မေမေကတဆင့် သိတာပါ။ စားကြည့်တော့ တကယ် ဗိုက်ကျတယ်ရှင့်။ ရှားစောင်းလက်ပတ် ငါးတက်လောက်ကို ဘေးက စူးသွားတွေကို ဓားနဲ့ခွာပီး လက်တစ်ဆစ်လောက်လေး တွေကိုလှီးပါ(အခွံမနွှာတော့ ထုပ်ထုပ်ထုပ် နဲ့ စားလို့ကောင်းသလိုပိုဆေးဖက်ဝင်တာပေါ့)ထန်းလျက်(အညို) ငါးကျပ်သားလောက်ကိုဆီ ၅ ကျပ်သားလောက်ထဲကို ထည့်ပီး အရည်ပျော်အောင်မွှေပါ။ ထန်းလျက် အရည်ပျော်သွားရင် ရှားစောင်းလက်ပတ်ထည့်ပါ။ ရှားစောင်း လတ်ပတ်က အရည်ထွက်တဲ့အတွက် … Read more
သင့်ကား ဆီအရမ်းစားနေပြီလား ဒါဆိုရင် ဘာတွေကို အဓိက စစ်ဆေးမလဲ
သင့်ကား ဆီအရမ်းစားနေပြီလား ဒါဆိုရင် ဘာတွေကို အဓိက စစ်ဆေးမလဲ မော်တော်ကားတွေရဲ့ ဆီစားနှုန်း သက်သာအောင် ရည်ရွယ်ပြီး အင်ဂျင်အသေးစား တပ်ဆင်ထားတဲ့ မော်ဒယ် တွေကို အသုံးပြုမှုများနေပေမယ့် အသုံးပြု မောင်းနှင်မှု နည်းစနစ် မကျတဲ့အခါ ဆီအရမ်းစားလာပါတယ်။ အဲဒီလို ဆီအရမ်းစားလာတဲ့အခါ မိမိရဲ့ ကားကို ပြန်လည် စစ် ဆေးဖို့လိုတာမို့ ဘယ်လို အချက်တွေကို စစ်ဆေး ရမလဲဆိုတာကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ (၁) Plug မကောင်းတဲ့အတွက် အင်ဂျင်ပေါက်ကွဲချက် မမှန်ဘဲ ဆီစားများစေနိုင်ပါတယ်။ဒါဟာ စွမ်းအင် ထွက်ရှိမှု မမှန်တာကြောင့် ဆီပိုမို အသုံးပြု မောင်းနှင်ရစေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွက် Plugကို ကီလို ၁၅၀၀မောင်းနှင်ပြီးတိုင်း ဖြစ်စေ၊ တလတခါဖြစ်စေ အနည်းဆုံး စစ်ဆေး လဲလှယ်သင့်ပါတယ်။ (၂) Air-Conလို … Read more
မြန်မာပြည်ကထွက်တဲ့ ကမ္ဘာ့မှာ အရှားဆုံးကျောက်
မြန်မာပြည်ကထွက်တဲ့ ကမ္ဘာ့မှာ အရှားဆုံးကျောက် (တကမ္ဘာလုံးမှာ ၂၆ လုံးပဲရှိပါတယ်) မြန်မာပြည်ကထွက်တဲ့ ကမ္ဘာ့မှာ အရှားဆုံးကျောက်… ကမ္ဘာမှာအရှားဆုံး ကျောက်မျက်ရတနာဟာ မြန်မာပြည်ကထွက်တဲ့ ပိန်းနိုက် Painite ပါ။ 2016 ခုနှစ်ကရေးခဲ့တာမို့ အချက်အလက် အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါတယ်။ memory တက်လာတာတွေ့လို့ ပြန်ရှယ်လိုက်တာပါ။ ဘာကြောင့်အရှားဆုံးလဲဆိုရင် ၁၉၇၉ အထိ တကမ္ဘာလုံးမှာ ၂ လုံးပဲရှိပါသတဲ့။ အခုအထိ ရှားမှန်းသိလို့ ရှာတာတောင်မှ တကမ္ဘာလုံးမှာ ၂၆ လုံးပဲရှာတွေ့သေးပါတယ်။ ဘယ်ကထွက်သလဲဆိုရင် မြန်မာပြည်ကပဲထွက်တယ်လို့ယူဆထားပါတယ်။ ဘာကြောင့် ပိန်းနိုက်လို့ခေါ်သလဲ။ မစ္စတာပိန်း A.C.D. Pain ဟာ မြန်မာပြည်ကဝယ်ခဲ့ပြီး ၁၉၅၄ မှာ British Museum ကိုလှုတော့မှ ကမ္ဘာမှာ အရှားဆုံးကျောက်အဖြစ်စသိပြီး Painite လို့ Mr. Pain ကိုဂုဏ်ပြုခေါ်တာပါ။ … Read more
တသောင်းတန် ငွေစက္ကူ အတု၊ အစစ်ကို သေချာပေါက် ခွဲခြားနိုင်မယ့် နည်းလမ်း
တသောင်းတန် ငွေစက္ကူ အတု၊ အစစ်ကို သေချာပေါက် ခွဲခြားနိုင်မယ့် နည်းလမ်း အရှေ့တောင် အာရှမှာကိုက မြန်မာပိုက်ဆံတွေဟာ အလွန် ကွာလ တီချာတူးလန်တယ်၊ ဘယ်တိုင်းပြည်မှာမှလည်း မြန်မာငွေကိုလဲလို့ မရဘူး၊ ယခင် မဆလ လက်ထက်က ငွေစက္ကူတွေဟာ စက္ကူသားရော လုံခြုံရေးပိုင်းက အစ ဒီဇိုင်း အပြင်အဆင် ခပ်တည်တည် ရုပ်ထွက်သေးတယ်၊ ငွေစက္ကူဟာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ အခင်းအကျင်းထဲမှာပါတယ်။ မြန်မာကျပ်ငွေ ငါးထောင်၊ တစ်သောင်း အတုတွေ ဘုံးပေါလအော ထွက်တယ်၊ အတုလုပ်တဲ့သူတွေလည်းမိတယ်၊ လုပ်တဲ့ သူတွေက လည်း ထောင်မကြောက် တန်းမကြောက် စူဠမဟာဒူလပိန်းတွေ ငွေစက္ကူ သန့်သန့်တစ်ချပ်ကို scanner နဲ့ ပုံရိပ် ဖတ်တယ်၊ ပြီးတော့ ခပ်ပေါပေါ ကာလာပရင်တာနဲ့ သာမန် အေဖိုးစက္ကူပေါ် … Read more
အချို့သော ဟော့ပေါ့ အနှစ်တွေ၊ မာလာဟင်း အနှစ်တွေကို ဒီလိုဆီတွေနဲ့ ချက်တာပါတဲ့
အချို့သော ဟော့ပေါ့ အနှစ်တွေ၊ မာလာဟင်း အနှစ်တွေကို ဒီလိုဆီတွေနဲ့ ချက်တာပါတဲ့ အချို့သော ဟော့ပေါ့ အနှစ်တွေ၊ မာလာဟင်း အနှစ်တွေကို ဒီလိုဆီတွေနဲ့ ချက်တာပါတဲ့.. တရုတ်တွေ၊ ယိုးဒယားတွေ မြန်မာပြည်တွင်းကို ဓာတုပစ္စည်းတွေနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ Hot Pot အနှစ်တွေကို တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် တင်သွင်းရောင်းချလာတယ်။ အဝစား Hot Pot တွေကို လူကြိုက်များလာတဲ့အခါ Hot Pot ဟင်းရည်တွေကို လုံလောက်စွာ ပြုတ်ဖို့ ဝက်ရိုး၊ ကြက်ရိုးတွေ လုံလုံလောက်လောက် မရှိတော့ အဝစား ဘူဖေးဆိုင်တွေမှာ ဓာတုပစ္စည်းတွေနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ တရုတ်ပြည်မှာဆို အဲလို အနှစ်တွေကို စားရန်မသင့်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဟော့ပေါ့အနှစ်တွေကို သုံးလာကြတယ်။ အရင်က တရုတ်ပြည်မကြီး Hot Pot စားသောက်ဆိုင်ကြီးတွေက အမှိုက်စွန့်ပစ်တဲ့ … Read more
ခွေးလေးတွေကိုအစာကျွေးတာ ဘယ်လောက်ကုသိုလ်ရလဲ ဖတ်ကြည့်နော်
January 15, 2022 January 15, 2022 by ApannPyay Media
ခွေးလေးတွေကိုအစာကျွေးတာ ဘယ်လောက်ကုသိုလ်ရလဲ ဖတ်ကြည့်နော် ဘယ် နေရာရောက်ရေ ာက် ခွေးကျွေးတဲ့ အလုပ်ကလေးကိုတော့ ဝတ်တစ်ခုလိုကိုထားပြီးလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။တစ်ခါတလေ ဆို လမ်းပေါ်မှ ာခွေးပိန်ကလေးတွေ တွေ့ ရရင်တောင် နီးစပ်ရာမုန့်ဆိုင်ကဝယ်ပြီး ကျွေးခဲ့ဖူးပါတယ်။တစ်နေ့တော့ ဒီခွေးကျွေးတာနှင့်ပတ်သက်ပြီး သူငယ်ချင်းကမေးခွန်းတစ်ခုမေးလာပါတယ်။ တနင်္လာနံမို့ ခွေးကျွေးတာလားတဲ့၊မိမိက တနင်္လာနံဆိုတာဘာလဲလို့ ပြန်မေးတော့ သူငယ်ချင်းက ငွေနံလေတဲ့။ဒီတော့မှမိမိလည်းသဘောပေါက်သွားပြီး တနင်္လာနံကြောင့်တော့မဟုတ်ဘူး။ သီဟိုဠ်ဝတ္ထုလေးတစ်ပုဒ်ကို ဖတ်ဖူးထားလို့ပါလို့ပြောပြီး အဲဒီသီဟိုဠ်ဝတ္ထုလေးကိုပါ သူငယ်ချင်းကိုပြောပြဖြစ် လိုက်ပါတယ်။သူငယ်ချင်းကသြော်… ဒါကြောင့်ကိုးလို့ အတည်လိုလိုနောက်သလိုလိုနဲ့ ပြန်ပြောခဲ့တာ အခုအထိမှတ်မိနေပါသေးတယ်။ သူငယ်ချင်းကိုပြောပြဖူးခဲ့တဲ့ သီဟိုဠ်ဝတ္ထုလေးကို ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကိုလည်း ပြန်ပြောပြချင်ပါတယ်။တစ်ခါတုန် းက သီဟိုဠ်ကျွန်းမှာ “အရှင်စူဠနာဂ” လို့အ မည်ရတဲ့ မထေရ်တစ်ပါးရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ သီဟိုဠ်ကျွန်း အနုရာဓမြို့မှာ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ညှပ်ရိုးတော်ကို ဌာပနာထားရာလည်းဖြစ်၊ ဒေဝါနံပိယတိဿမင်းကြီးရဲ့ ကောင်းမှုလည်းဖြစ်တဲ့ ထူပါရုံစေတီဆို တာရှိပါတယ်။ ထူပါရုံစေတီတော်ရဲ့အနီးမှာရှိတဲ့ ကျောင်းကြီးကိုလည်း ထူပါရုံကျောင်းတိုက်ကြီးလို့ … Read more